Who were Bengali, so called Rohingya?: " ရိုဟင်ဂျာ" သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးချိမ်းချောက်မှု - National security threat - ဖြစ်သည်
၁၉၉၂ ခုနှစ် UNHCR နှင့် Amnesty International တို့ ၏စာရင်းများအရ မောင်တောဒေသတွင်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံသူများသုံးသိန်းနီးပါးသာရှိခဲ့ရာမှယခုအခါ
(မြန်မာအစိုးရစာရင်းအရ) ရှစ်သိန်းကျော်ရှိနေပြီ။အနှစ် ၂၀ အတွင်းလူသန်းဝက်တိုးလာခဲ့သည်။
သို့ သော် UNHCR ၏အာရှဒေသဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရသူကစ်တီမက်ကင်းဆေး (((9(9Kitty McKinsey
ကိုဒုက္ခသည်များ (refugees ဟု ကိုယ့်သဘောဖြင့် (unilaterally) သတ်မှတ်၍မရ။ အထူးသဖြင့်လတ်တလောဗြုံးစားကြီးရောက်လာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ
ဟုဆိုထားရာဒီလူတွေ“ဘယ်နိုင်ငံသားတွေလဲ” ဆိုတာမြန်မာနှင့်ယခုအချိန်အထိခေါင်းရှောင်နေသော ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှတို့ ရှေးဦးစွာအကြိပ်အနယ်ငြင်းခုံရဘို့ ရှိသည်။ဤပြဿနာမပြီးပြတ်မချင်း UNHCR၏ အခဏ်းကဏ္ဍပေါ်မလာနိုင်။ဒုက္ခသည် Handbook တွင် UN ကစောင့်ရှောက်ရမည့်သူများ(Persons of
concern to UNHCR) များကိုအဆင့်ငါးဆင့်ခွဲ၍သတ်မှတ်သည်။“ဒုက္ခသည်”များ (refugeesသည်နံပါတ် ‘တစ်’ အုပ်စုဝင် များဖြစ်ကာ UN ကအစအဆုံးအကုန်လုံးတာဝန်အပြည့်ယူရမည့် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်သောနိုင်ငံမဲ့လူသားများ (stateless persons) ကိုမူ UNHCR ကများပြားလှသော
ကန့် သတ်ချက် များဘောင်အတွင်းမှစောင်မပေးရန်သာဖြစ်သည်။(ဥပမာအခြေခံလူ့ အခွင့်အရေးများ ကိုလေးစားရန်ဆော်သြခြင်း၊ အရေးပေါ်ဆေးဝါး၊ စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုရစေရန်စီစဉ်ပေးခြင်း)။
ကစ်တီမက်ကင်ဆေး၏အပြောနှင့်ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှအစိုးရ၏ပြုမူပုံတို့ ကိုအကဲခပ်ရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည်ဤပြဿနာကိုဤနှစ်နေရာစလုံးမှအကူအညီရဖို့ နည်းသည်။
အစိုးရသည်ပင်မူဂျာဟစ်သူပုန်များကိုထောင်ဒဏ်စီရင်၍နှစ်စေ့သောအခါသူတို့ ၏မူရင်းနိုင်ငံ ဖြစ်သောအရှေ့ ပါကစ္စတန်(ယ္ခုဘင်္ဂလားဒက်ရှ်)ကလက်မခံသဖြင့်ထိုသူများသေကုန်သည်
(၃) ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုသင်အကျိုးပြုနိုင်သောအချက်အနည်းဆုံးတစ်ချက် (
(humanitarian aspect) ကပို၍မီးမောင်းထိုးပြတာခံလာရလျှင်ပြဿနာ၏မူလဇစ်မြစ် ပျောက်ကာနိုင်ငံတကာမှသတင်းဖတ်ပရိဿတ်၏အပေါ်ယံအမြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
အင်အားချင်းမတိမ်းမယိမ်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ၂ခုအကြားမည့်သည့်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးနိုင် သောပြဿနာတစ်ခုသည်အင်အားသုံးကြသည်အထိရှေးရှုသွားတတ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံကန့်သတ်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်အဆုံးစွန်အလားအလာ (the extreme scenario of a
သတိပြုရန်။ (ကြောက်လန့် ၍ထွက်ပြေးသောအစ္စလမ်ဘာသာဝင်စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှဆရာမရေနစ် သေဆုံးခြင်းအတွက်သူမ၏ရခိုင်တပည့်များက၀မ်းနည်းကြောင်းအခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်သင့်သည်။)
(၆) မိမိဘက်ကအားနည်းချက်ကြီးဖြစ်နေသောအစိုးရယန္တယားအကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ယိုပေါက်ဟာပေါက်များကိုဆက်လက်၍သီးမခံတော့ဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွပ်ရေး -
(၁၀) ဒေသခံလူထုများ၏အကြံဉာဏ်များ၊ ကြိုတင်သတိပေးချက်များ (local public inputs such as suggestions and alerts) ကိုအလေးအနက်ထားလက်ခံစီစစ်၍အလျှင်အမြန် (fast track) ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဝန်ထမ်းယန္တယားလာဘ်စားမှုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အတူယှဉ်တွဲ၍ကျင့်သုံးသင့်သည်။
ဒုတိယမေးခွန်းအတွက်ပေးလိုသောအဖြေတစ်ခုမှာရခိုင်ပြည်နယ် - အထူးသဖြင့်ဘူးသီးတောင် မောင်တောတွင်စုခဲနေသည့်ဘင်္ဂလီများကိုပြည်ထောင်စု၏တိုင်းဒေသကြီး (၇) ခုသို့ လူစုခွဲ၍
ရွှေ့ ပြောင်းစေခြင်းဖြင့်သီးသန့် နယ်မြေစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဖျက်သိမ်းပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ပsponsorsများရနိုင်ရန်OISအစ္စလမ်နိုင်ငံများအကူအညီရယူ၍ရှာဖွေခြင်းနိုင်ငံသားပြုပေးနိုင် မည့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသူများကိုနိုင်ငံသားပြုပေး၍ကျန်လူများနှင့်အမြန်ခွဲထုတ်ရန် -()()(()
“ကုလားအရေးကို ဓါးမသွေးလောက်” ဟုမျိုးချစ်မြန်မာစာဆိုတော်ကြီးသခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းကလေးချိုးကြီးတစ်ပုဒ်ထည်းတွင်ထည့်သွင်းစပ်ဆိုခဲ့ဘူးသည်။
ဤပြဿနာသည်အနောက်အခြေစိုက်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ အစည်းတွေကပုံဖေါ် နေသလို(ဗုဒ္ဓဘာသာ)လူများစုနှင့်(မူဆလင်)လူနည်းစုပြဿနာမဟုတ်။ တရားမ၀င်လူဝင်မှုပြဿနာသာဖြစ်သည်။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 6:52 PM
Do you even know which way you are guiding? That was the great Hitler way for his Nazi Racism. Sending them to camps? Then what, before your so called naturalisation?
Are you suggesting to restrict to get two children to all Myanmar citizens or just for Rohingya?
Are you guys feeling insure on your reproduction or on your own women?
It's time and great opportunity to rebuild the nation, don't you dare start with dishonest and tricks.
We could simply honest, love and trust among all our nationalities to rebuild and rise asagreat Asian lion, every ethnic, every faith, every background will forgive and welcomed with whole heart.
Htoon Aung Kyaw said...
Rohingya ဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟုတ်မဟုတ် အငြင်းပွားစရာကိုမရှိဘူး။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာ ဒီလို ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်၊ ဗီဇရှိတဲ့ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုမှ မရှိဘူး။ အတူတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာလဲ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒုတိယ Kosovo မဖြစ်ပါရစေနဲ့။ သူတို့နဲ့ မျိုးနွယ်တူ၊ အကျင့်စရိုက်တူတဲ့ နိုင်ငံတွေအများကြီးပါ။ သွေးစည်းညီညွတ်တယ်ဆိုရင် လက်ခံလိုက်ကြပါ။ ခွေလို ၀ိုင်းအူမနေကြပါနဲ့။
We will kill them,